e.l.f. Matte Lip Color | Buy online | SHOP.COM.MM
နှုတ်ခမ်းသားကို သဘာဝအတိုင်းလှပစေကာ တာရှည်ခံခြင်း
ဗီတာမင် A, Cနှင့် Eတို့ဖြင့် စီမံဖော်ထုတ်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းသားခြောက်သွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း
ဗီတာမင် A, Cနှင့် Eတို့ဖြင့် စီမံဖော်ထုတ်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းသားခြောက်သွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် အရမ်းသဘောကျပါတယ် Read more Hide
Matte Lip Color>>> အရောင်လေးကအရမ်းလှပါတယ်
ပြီးတော့ vitamin လည်းပါလို့ဆိုးရင် နှုတ်ခမ်းသားမပျက်စီးတော့ဘူးပေါ့ Read more Hide
I have worn this withoutagloss on top and haven't found it to be as drying as some of the other matte lipsticks.
Thanks ELF for the great product! Read more Hide
e.l.f Matte Lip Color လေးက ဆိုးရတာအရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ ပြန်ချွန်စရာလည်းမလိုဘူး။ Read more Hide
Specifications of Matte Lip Color